Plus500 - Funda ukuRhweba
I-Plus500 yenye yezona zinto zikhokelayo kwi-intanethi "zeDesika yokuSebenza" emhlabeni. Inkampani ibonelela ngorhwebo lweCFD kwizitokhwe, izinto zorhwebo, ii-indices, iimali kunye nokunye. I-Plus500 inikezela ngokusasazeka okuphantsi kakhulu kwezinye zeeparitha ezinkulu zemali. Xa kuziwa kwiqonga labo lokuthengisa kunye nezixhobo, i-Plus500 ibonelela ngamava omsebenzisi obalaseleyo. I-Plus500 ngumrhwebi owaziwayo nothembekileyo, odweliswe kwiLondon Stock Exchange.
I-Plus500UK Ltd igunyazisiwe kwaye ilawulwa yi-FCA (# 509909)
I-Plus500CY Ltd egunyazisiweyo kwaye ilawulwa yiCySEC (# 250/14)
I-Plus500SG Pte Ltd, enelayisensi yi-MAS (# CMS100648-1) kunye ne-IE Singapore (# PLUS / CBL / 2018)
I-Plus500AU Pty Ltd (ACN 153301681), enelayisensi ngu: ASIC e-Australia, AFSL # 417727, FMA eNew Zealand, FSP # 486026; UMboneleli weeNkonzo zeMali ogunyazisiweyo eMzantsi Afrika, FSP # 47546
Awunazo okanye unamalungelo kwiimpahla ezingaphantsi.
Nceda uqwalasele amaxwebhu eNgcaciso akhoyo kwiwebhusayithi yethu.
* Iipesenti ezingama-80.6 zeentengiso zeCFD zilahlekelwa yimali
Iplatifomu enobuchule kwaye kulula ukuyisebenzisa ngezixhobo zokurhweba ezisebenziseka lula.
Akukho mda wexesha kwiiakhawunti zedemo! Ziqhelanise kangangoko ufuna.
Iidipozithi ezikhawulezayo nezilula. Ukurhoxiswa kunye nokuvulwa kweakhawunti.
Ulawulo kunye neelayisensi:
I-FCA, i-ASIC, i-CySEC, i-FSP, iMAS
Ii-CFDs kwi-Forex, iiSitokhwe, iiMveliso, iiNketho kunye neeIndices
Iimali zemali zedijithali:
Ifumaneka nge-24/7 nge-imeyile kunye nengxoxo ekwi-Intanethi ngeelwimi ezininzi.
I-45 Moorfields Tenter House, Suite 705, 7th Floor, London, EC2Y 9AE, eunited Kingdom.
Qalisa ukurhweba nge-Plus500
I-80.6% yeeakhawunti zentengiso zeCFD zilahlekelwa yimali